फेसबुक चलाउनुहुन्छ ? त्यसोभए तपाईँको यस्ता गोप्य जानकारी थाहा हुन्छ फेसबुकलाई - Technology Khabar
टेलिकम प्रबन्ध निर्देशक कामिनीलाई सरकारले बर्खास्त गर्यो
सेल्फी खिच्दा खोज्दा हुम्लामा हेलिकप्टरको पंखाले लागेर एककाे मृत्यु
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको ७९ औं शाखा काठमाडौंको टोखामा
फेसबुक चलाउनुहुन्छ ? त्यसोभए तपाईँको यस्ता गोप्य जानकारी थाहा हुन्छ फेसबुकलाई
टेक्नोलोजी खबर ३१ जेष्ठ २०७५, बिहीबार १३:१४
काठमाडौं ।पछिल्ला दिनहरुमा सामाजिक संजाल साइट फेसबुक निकै विवादमा पर्दै आएको छ । क्याम्ब्रिज एनालिटिका डाटा लीक विवादपछि फेसबुकको बारेमा लगातार प्रश्नहरु हुँदै आएका छन् ।
फेसबुकले पनि यूजरेको निजी डाटाहरु, उनीहरुको गतिबिधिहरु समेतको डाटा संकलन गर्ने गरेको स्वीकार गरेको छ ।
फेसबुकले यूजरको फेसबुक एकाउन्टमा भएका भन्दा बाहिरका बिषयहरुको बारेमा पनि जानकारी राख्ने गरेको छ । तपाईँले फेसबुक लगइन अर्थात फेसबुक खुल्लै राखेर कम्प्यूटरमा अन्य कार्य गर्नुहुन्छ भने फेसबुकले त्यसको बारेमा समेत जानकारी लिने गरेको सार्वजनिक भएको छ । तपाईँको कम्प्यूटरको प्रकार, स्तर, माउस, की बोर्डको प्रयोग लगायतका हरेक विषयहरु फेसबुकले स्टोर गर्ने गरेको छ ।
यी जानकारीबाट फेसबुकले यूजर्सले कुन किसिमको कन्टेटमा कति समय बितायो भन्ने पत्ता लगाउँछ । यो जानकारीको प्रयोग फेसबुकले तपाईँको एकाउन्ट प्रोफाइलमा विज्ञापन देखाउनका लागि प्रयोग गर्ने गरेको छ ।
डाटा लीक विवादपछि फेसबुकले अमेरिकी संसदको उच्च सदन यूएस सीनेटमा बुझाएको जवाफमा यी डाटाहरुको बारेमा उल्लेख गरेको छ । फेसबुकले २२५ पेजको डकुमेन्टमा करिब २ हजार प्रश्नको उत्तर हालै दिएको छ ।
कुन डाटा छ फेसबुकमा
डिभाइसको जानकारी– फेसबुकले तपाईँको डिभाइसको सम्पूर्ण जानकारी लिने गरेको छ । तपाईँको जून कम्प्यूटरबाट फेसबुक लगइन गर्नुहुन्छ, त्यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी फेसबुकसँग हुन्छ । जसमा तपाईँको डिभाइसमा कति स्टोरेज छ, कुन कुन फोटो छ, कसको फोन नम्बरहरु सेभ गरिएको छ जस्ता जानकारी हुन्छ ।
एपको जानकारी– अर्को भनेको एपको बारेमा जानकारी हो । यसमा फेसबुकले तपाईँले प्रयोग गर्ने गरेको सम्पूर्ण एप्सको जानकारी राख्छ भने तपाईँले प्रयोग नगरेपनि डिभाइसमा डाउनलोड गरिएको एप्सको बारेमा थाहा हुन्छ । यूजरले कुन एप कति समयसम्म प्रयोग गर्दछ भन्ने समेत जानकारी फेसबुकले राख्ने गरेको छ।
डिभाइस कनेक्सन–फेसबुकले तपाईँको डिभाइस केमा कनेक्ट भएको छ भन्ने समेत जानकारी जुटाउँछ । तपाईँले कुन नेटवर्क प्रयोग गरिरहनुभएको छ वा कुन वाईफाई प्रयोग गरिरहनुभएको छ भन्ने डाटा राख्छ । त्यस्तै फेसबुकले डिभाइसको जीपीएस समेत ट्रयाक गर्ने गरेको छ, जसमा यूजरको डिभाइस कुन स्थानमा छ भन्ने जानकारी रहेको हुन्छ। यसको अर्थ तपाईँले डिभाइस बोकेर हिडिरहनुभएको छ भनेतपाईँ हिँडेको स्थानको बारेमा पनि जानकारी लिन्छ ।
ब्याट्रि लेबल– यूजरले प्रयोग गरिरहेको डिभाइसको ब्याट्रीको बारेमा पनि फेसबुकले निरन्तर निगरानी गरिरहेको हुन्छ । तपाईँको डिभाइसको ब्याट्रीको लेभल कति प्रतिशत छ र कुन कुन एप्सले कति ब्याट्री प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने पनि जानकारी राख्छ । यसबाट फेसबुक एपले यूजरको डिभाइसको अधिक ब्याट्री लिएको छ वा छैन भन्ने आधारमा आफ्नो एपलाई अपडेट गर्ने गर्दछ।
क्याम्ब्रिज एनालिटिका डाटा लीक जीपीएस ट्रयाक डिभाइस कनेक्सन फेसबुक	३१ जेष्ठ २०७५, बिहीबार १३:१४
Previous: एप्पलका उत्पादनहरु अब अझ बढि सुरक्षित, इन्क्रिप्सन सेटिंगमा थप सुधार
Next: आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स र बयोधा हस्पिटल बिच नगद रहित सेवा सम्झौता
३० श्रावण २०७५, बुधबार १९:३९
२९ श्रावण २०७५, मंगलवार २२:५१
२९ श्रावण २०७५, मंगलवार १९:४५
सुबिसुको सेल्स आउटलेट सुविसु स्टेशन काठमाडौंको कलंकीमा
मेगा बैंकका ग्राहकहरुलाई स्टार अस्पतालमा १५ प्रतिशतसम्म छुट
हुवाई नोभा थ्री तथा नोभा थ्री आई स्मार्टफोन साउन ३० गतेदेखि बिक्रीका लागि उपलब्ध
आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स र सीपी अस्पताल बिच नगद रहित सेवा सम्झौता
सामसंगको ग्यालेक्सी एस १० स्मार्टफोनमा ट्रिपल क्यामरा सेटअप हुने
३० श्रावण २०७५, बुधबार २०:०४
२९ श्रावण २०७५, मंगलवार १९:०१
२९ श्रावण २०७५, मंगलवार १८:३६
२९ श्रावण २०७५, मंगलवार १८:२७
२९ श्रावण २०७५, मंगलवार १८:०७
बाबा रामदेवको कम्पनी पतंजलिले पुन ल्यायो च्याटिंग एप किम्भो, ह्वाट्सएपलाई टक्कर दिने दाबी https://t.co/i5fIKi7Rmy 10 hours ago
टेलिकम प्रबन्ध निर्देशक कामिनीलाई किन हटाईयो पदबाट, यस्ता छन् मुख्य कारणहरु https://t.co/NmmcD3rMJ6 10 hours ago
हुवाई नोभा थ्री तथा नोभा थ्री आई स्मार्टफोन साउन ३० गतेदेखि बिक्रीका लागि उपलब्ध https://t.co/6PYGhc3glb 2018/08/14
सामसंगको ग्यालेक्सी एस १० स्मार्टफोनमा ट्रिपल क्यामरा सेटअप हुने https://t.co/mbyFU9jigv 2018/08/14
सामाजिक संजाल फेसबुकमा नेपालीहरुले स्पेनिस ला लिगा निशुल्क हेर्न पाउने https://t.co/uN2iZvSgZB 2018/08/14